Mividianana vovoka Letrozole (112809-51-5) Mpanamboatra sy mpamatsy - Factory
Letrozole (Femara) dia zava-mahadomelina nosoratana ho an'ny fitsaboana vehivavy voan'ny homamiadana voan'ny kanseran'ny hormone tsaratsara kokoa na tsaboina tamoxifen (Nolvadex). Ny fiantraikan'ny vatana, ny fifandraisana amin'ny zava-mahadomelina, ary ny fampidirana vohoka dia tokony hodinihina alohan'ny handraisana io fanafody io.
Rano Letrozole rojo (112809-51-5) video
Rano Letrozole roah (112809-51-5) Description
Ny voankazo letrozole Rao dia tsiranoka tsy miteraka arom-baraka, antsoina hoe Femara. Ampahany amin'ny kanseran'ny nono (toy ny hormone-receptor-kanseran'ny nono) eo amin'ny vehivavy aorian'ny taom-panafody. Ny voam-bary Letrozole roapolo koa dia ampiasaina mba hisakanana ny homamiadana tsy hiverina. Ny kanseran'ny nono dia natao haingana kokoa amin'ny hormone voajanahary antsoina hoe estrogen. Ny voankazo letrozole roapolo dia mampihena ny habetsan'ny estrogen ny vatana ary manampy amin'ny fampihenana na hampihenana ny fitomboan'ny kanseran'ny nono.
Estrogens dia novolavolain'ny fiovan'ny androgens amin'ny alàlan'ny asan'ny aromatase enzyme. Ny voankazo letrozole Rao dia manakana ny famokarana estrogens toy izany amin'ny alàlan'ny fifanatonana, mifatotra amin'ny fifehezana ny taratr'ilay cytochrome P450. Ny dingana manokana dia miavaka, ary ny vovo-kafe Letrozole Raw dia tsy mampihena ny famokarana mineraly-na corticosteroids. Mifanohitra amin'izany, ny fihetsika manohitra ny ady atao amin'ny tamoxifen, ny fitsaboana lehibe amin'ny fitsaboana alohan'ny fahatongavan'ny atidoha aromatase, dia noho ny fanelingelenany ny mpizara estrogen, fa tsy manakana ny famokarana estrogen.
Ny voankazo letrozole roapolo dia nampiseho ny haavon'ny estrogen amin'ny 98 isan-jato raha nanangana ny testosterone. Ny hetsika anti-estrogen ny vovoantitra Raw Letrozole dia aleon'ny atleta sy ny mpandoro zavamaniry ampiasaina mandritra ny diabeta steroid mba hampihenana ny fandosirana noho ny fisotroana tafahoatra loatra ary hisorohana ny fanabeazana ny tetezana momba ny tovovin-java-mahazatra izay fihenan-tsakafo sasany amin'ny anabolic steroids.
Rojo Letrozole roah (112809-51-5) Specifications
Product Name Rojo Letrozole roapolo
Anarana simika Femara; , 4 '- ((1h-1,2,4-triazol-1-yl) methylene) dibenzonitrile; Letrozol
molekiolan'ny Formula C17H11N5
molekiolan'ny Wvalo 285.31 g / mol
mitsonika Point 184-185 ° C
Ny antsasaky ny biolojia 2 andro
Color Mandritra izany fotoana izany na amin'ny tsy fahampian'ny vovoka
Solubility Water Solubility 0.0799 mg / mL
Application 1. Nalaza tamin'ny karazana homamiadana sasany (toy ny hormone-receptor-tsaratsara-nify voan'ny hormonina) any amin'ny vehivavy aorian'ny taonan'ny menopause.
Inona ny roja Letrozole Raw (112809-51-5)?
Letrozole dia ampiasaina mba hanasitrana karazana homamiadana sasany (toy ny hormone-receptor-tsaratsara-tavy voan'ny hormonina) any amin'ny vehivavy aorian'ny taona. Letrozole koa dia ampiasaina mba hisorohana ny homamiadana tsy hiverina. Ny kanseran'ny nono dia natao haingana kokoa amin'ny hormone voajanahary antsoina hoe estrogen. Mampihena ny habetsahan'ny estrogen ny vatana ary manampy amin'ny fampihenana ny fivoaran'ny kanseran'ny nono ny letrozole.
Rano Letrozole roah (112809-51-5) miasa
Letrozole dia mampidina ny haavom-pitabatabana vehivavy ao amin'ny vatana. Estrogen dia mampirisika ny kanseran'ny nono mba hitombo. Ireo kanseran'ny nono ireo dia antsoina hoe hormone sensitive or hormone receptor positive. Letrozole dia afaka mampiato na mampihena ny fitomboan'ny kansera.
Letrozole dia miasa ao amin'ny vehivavy izay manana ny fihenan'ny menopause.
Aorian'ny menopause, ny vehivavy dia tsy mamoaka estrogen avy amin'ny ovoany. Mbola mamokatra kely ihany anefa izy ireo amin'ny fampiasana anzima iray antsoina hoe aromatase izay mampiova hormonina hafa momba ny firaisana antsoina hoe androgens amin'ny estrogen. Io fiovana io dia mitranga indrindra amin'ny tavy, ny hozatra sy ny hoditra. Letrozole dia karazana zava-mahadomelina antsoina hoe inhibitor aromatase. Manakana ny aromatasina izy io ka tsy afaka manova ny androgen ho any estrogen.
Rojo Letrozole roah (112809-51-5) Dosage
Ny dosie femara nomen'i Femara dia takelaka iray 2.5 mg iray andro isan'andro, tsy misy ifandraisany amin'ny sakafo.
Rojo Letrozole roah (112809-51-5) soa
Fandalinana lehibe roa no nampiseho ny tombontsoa avy amin'i Femara.
Ny fikarohana iraisam-pirenena BIG 1-98, nanomboka tamin'ny 1998, nampitaha an'i Femara ho tamoxifen taorian'ny nandidiana ny vehivavy voan'ny pensilihazo izay voan'ny homamiadan'ny hormone-receptor-positive sy ny homamiadan'ny nono. Ny valiny dia naneho fa i Femara dia tsara kokoa noho ny tamoxifen:
* Mampitombo ny fotoana alohan'ny ahafahan'ny homamiadana miverina any amin'ny olona izay mahatsapa ny fiverimberenana
* Mampihena ny mety ho voan'ny kansera miparitaka any amin'ny faritra hafa amin'ny vatana
Ny fandinihana MA-17, izay natao tany Kanada, dia nanontany raha ny fakana Femara nandritra ny taona 5 TANTERAKA dia naka tamoxifen nandritra ny taona 5 (ho an'ny taonan'ny 10 nandritra ny fitsaboana hormonina) mety hampidina ny mety ho voan'ny homamiadana miverimberina ao amin'ny vehivavy voan'ny aretina azo avy amin'ny hormone -receptor-positive, kanseran'ny nono. Ny valiny dia nampiseho fa Femara:
* Nihena ny mety ho voan'ny kansera
* Vao mainka mety hampidi-doza ny homamiadana miparitaka amin'ny vatana hafa
raha oharina amin'ny tsy fakana an'i Femara taorian'ny taona 5 tamoxifen.
Buy Levitra Letrozole avy amin'ny Buyaas.com